Ukuthengisa ngokuthe ngqo kutshintshile-Ayisiyiyo iMithetho yama-40/40/20 kwakhona Martech Zone
NgeCawa, Agasti 26, 2007 NgoMvulo, Agasti 27, 2007 Douglas Karr
Bendiququzelela iishelufa zam zeencwadi ngale ntsasa ndaza ndatyhila incwadi endala yokuThengisa ngqo ebendinayo, i-imeyile ngqo kwiNombolo. Yapapashwa yi-United States Post Office kwaye yayisisikhokelo esihle kakhulu. Xa ndenza iposi ngqo, ndaya kumphathi weposi ndafumana ibhokisi yazo. Xa sidibana nomthengi ongazange enze i-imeyile ngqo ngaphambili, yayisisibonelelo esihle kubo ukuba bafunde izibonelelo zokuthengisa ngokuthe ngqo ngokukhawuleza.
Ukujonga le ncwadi namhlanje, ndiye ndabona ukuba zininzi izinto eziguqukileyo kule minyaka ilishumi idlulileyo- nakwiminyaka embalwa edlulileyo.
Ithiyori yakudala yokuthengisa ngokuthe ngqo yayingumgaqo wama-40/40/20:
40% Iziphumo zibangelwe luluhlu othumele kulo. Olu inokuba luluhlu owaluthengayo lokujonga izinto okanye unokubandakanya uluhlu lwabathengi bakho abakhoyo.
40% Iziphumo zibangelwe sisibonelelo sakho. Ndihlala ndibaxelela abathengi ukuba ixesha onalo kwiphulo lokuthumela ngokuthe ngqo ukutsala ithemba lalilingana nenani lamanyathelo phakathi kwebhokisi yeposi kunye nenkunkuma.
20% Iziphumo zibangelwe kukuyila kwakho. Kule mpelaveki ndifumene isiqwenga seposi esivela ngqo kumakhi omtsha wasekhaya. Kwakukho isitshixo sokuvavanya kwikhaya eliyimodeli. Ukuba isitshixo siyakulingana, uphumelela ikhaya. Esi sisibonelelo esinomdla esinokundenza ukuba ndiqhubele eluntwini elikufutshane- kuyilo olukhulu.
Imeyile ngokuthe ngqo kunye nokuthengisa ngomnxeba kusetyenziswa lo mthetho ubhontsi kule minyaka ingamashumi idlulileyo. I-Do Not Call Registry kunye ne-CAN-SPAM isenzo esingqina ukuba abathengi badiniwe kukungenelela kwaye abayi kunyamezela ukucela ngaphandle kwemvume. Ngapha koko, ndiyakholelwa ukuba ukungabikho kwemvume kuya kubangela ifuthe elibi kwimikhankaso yakho kwaye kufanelekile ukwandisa ukubaluleka koLuhlu.
ILizwi lokuThengisa ngomlomo ngoku liyinxalenye ebalulekileyo kuyo yonke intengiso yenkampani- kodwa ayiloSebe lezentengiso, lelomthengi. Ukuba awukwazi ukuhambisa izithembiso zakho, abantu baya kuva malunga nalo ngokukhawuleza kunexesha elithathayo ukwenza iphulo lakho. Ukuthengisa ngomlomo kuya kuba nefuthe elibonakalayo kuwo onke amaphulo entengiso. Ukuba awukwazi ukuhambisa, sukuthembisa.
Ayiphumi ngaphandle kolwimi ngokulula, kodwa ndiyakholelwa ukuba umthetho omtsha yi-5-2-2-1 Rule
50% Iziphumo zibangelwe luluhlu oluthumela kulo kwaye okubaluleke kolu luhlu yimvume ekufuneka uthethe nabo kunye nokuba uluhlu olo lujolise kulo kangakanani.
20% Iziphumo zibangelwe ngumyalezo. Ukujolisa umyalezo kubaphulaphuli kunyanzelekile. Umyalezo olungileyo kubaphulaphuli abalungileyo ngexesha elililo kuphela kwendlela yokuqinisekisa ukuba ungagcina imvume kwaye ufumane iziphumo ozifunayo kwimizamo yakho yokuthengisa.
20% Iziphumo zibangelwe kukufika. Ukuthengisa nge-imeyile, eli liphepha lokufika kunye nenkonzo elandelayo kunye nokwenziwa kwemveliso okanye inkonzo. Ukuba awukwazi ukuhambisa izithembiso ozithengisileyo, ilizwi lomlomo liya kuwukhupha loo myalezo ngokukhawuleza kunokuba ungazama ukuwubamba. Kufuneka "umhlalise" umxhasi kakuhle ukuze ube nokukhula ngempumelelo kwixesha elizayo.
10% isengubuchule bephulo lakho lokuthengisa. Unokucinga ukuba nditsho ukuba ubuchule abubalulekanga kunangaphambili - ayiyonyani- imvume, umyalezo kunye nokufika kubaluleke kakhulu kunangaphambili.
Umgaqo omdala we-40/40/20 wokuthengisa ngokuthe ngqo awuzange uthathele ingqalelo imvume, ukuthengisa ngomlomo, okanye ukwenziwa kwemveliso kunye nenkonzo. Ndicinga ukuba Umgaqo 5-2-2-1 yenza!
Landela kwiSabelo seNtengiso seKhangeli kwiColts.com
Agasti 26, 2007 ngo-9: 36 PM
Ndimele nditsho ukuba ikhonkco lakho lentengiso njengolayini wokuqala wazo zonke iibhlog ezithunyelwayo zenza ukuba kube nzima kakhulu ukugqiba into endifuna ukuyifunda kwiFeedDemon. Kuba andisasifumani isiqendu sokuqala, ndifumana kuphela intengiso, ndihlala ndimakisha ukutya konke njengokufundiweyo ngaphandle kokungena kuyo.
Ngelixa ndiqondayo isidingo sokwandisa ukubonwa, ndingacebisa ukuba mhlawumbi ukubeka isicatshulwa kumzimba wokuposa kunokuba umgca wokuqala ungavumela umxholo wakho ukuba ubenomdla ngakumbi kwaye uvumele abantu abafana nam ukuba bathathe isigqibo sobulumko ukuthumela ngumbono olungileyo okanye hayi.
Agasti 26, 2007 ngo-9: 54 PM
Tim, yingxelo entle leyo. Ndiqaphele ukuba nam emva kokuba ndiyithumele kwaye ndilibale ngayo… ngokuhlwanje ndiyise ezantsi kwesondlo. Enkosi ngokuthatha ixesha undazise. Ndiyayixabisa ngokwenene!
Agasti 26, 2007 ngo-10: 17 PM
UDoug, enkosi ngokuqonda kunye nokuphendula.